HORDHAC: Brazil vs Maxcio – Gool FM
HORDHAC: Brazil vs Maxcio
CR Shariif July 2, 2018
( Russia ) 02 Luulyo 2018. Labada xul ee ka socda waqooyiga iyo koonfurta America waa Brazil iyo Maxcio ayaa iska hor imaan doona cayaarta shanaad ee wareega 16 koobka adduunka.
Brazil waxay kaalinta kowaad kaga soo baxday Group E, Halka Maxcio ay kusoo baxday booska labaad ee Group F waxaana xusid mudan in kulankoodii kowaad ee tartanka ay 1-0 kaga badiyeen xulka koobka difaacanayay ee Germany oo koobka laga reebay.
Hadii cayaarta u dhaxeysa labada xul la isla gaaro “Extra Time ama Waqtiga Dheeriga, waxaa loo ogol yahay labada wadan in ay isticmalaan badal afaraad. Waana markii u horeeysay oo sharcigaas lagu dhaqmayo Koobka adduunka.
Garoonka: Samara Arena
Felipe Luis ayaa kusoo bilaaban doona dambeedka bixid kulankan 16 ay Brazil la dheeli doonto Mexico isagoo badalaya Marcelo, kasoo ku qasbanaaday in la badalo kulankii Serbia sababo la xariira dhibaato dhabarkaa.
Marcelo ayaa tababartay axadii waxaan laga yabaa inuu kusoo bilaawdo keydka.
Daafac midig Danilo ayaa kasoo kabtay dhibaato bowdada ah taaso ku maqnaa cayaartii Serbia, laakiin waxaa badalay Fagner, iyadoona laga yaabo inuu da’yarkan kasii dheelo kaalinta midgeed ee daafaca.
Mexico ayaa weyneysa daafaca muhiinka ee Hector Moreno, kaa oo ganaaxay markii ay u aruurtay laba jaalo.
Waxaana laga yabaa inuu booskiisa ka cayaaro Hugo Ayala, kaa oo aan dheelin tan iyo markii uu kusoo bilaawday safkii guusha ka gaaray kulankii koowaad xulka Germany.
Brazil waa guuldaro la’aan afar kulan oo ay koobka adduunka la cayaartay 3 guul iyo hal barbaro, iyagoona shabaqa ilaashtay dhamaan kulamadaas.
Kulankii u dambeyay eek u dhexmara koobka adduunka ayaa ahaa heerka Group 2014 markaan waxay galeen barbaro 0-0 ah.
Markaa kadib laba dhinac ayaa kulman mar qura, Brazil ayaana ku badisay 2-0 kulan saaxiibtinimo oo ka dhacya Sao Paulo bishii June 2015 iyagoo goolasha ka kala helay xiligaas Philippe Coutinho iyo Diego Tardelli.
Brazil marnaba ma guuldareysan kulan ay koobka adduunka la cayaartay wadan ka socda bartamaha ama waqooyiga America.
Lixdii guuldaro ee u dambeysay koobka adduunka waxay Brazil kasoo gaareysay wadamo Europe. Waqtigii u dambeesyay oo ay guuldaro kala kulman koobka adduunka dal aan aheyn Europe waa Argentina 1990, kulan wareega 16 ahaa oo looga badiyay gool qura waxaana dhaliyay Claudio Caniggia.
Mexico marka kaliya oo ay guul ka gaareen wadama koonfur America waa kulan ay 2-0 kaga badiyeen Ecuador cayaar qeyb ka aheyd heerka group sanadkii 2002.
Guuldaro soo gaartaa Mexico ayaa ka dhignaaneysa in ay wareega 16 koobka adduunka ay ku harayaan markii todobaad oo xariir ah.
Shaxda macquulkaa ee Brazil vs Maxcio.
Xulka qaranka Croatia oo ciyaar leysku daalay kadib rigooreyaal ku reebay dhigiisa Denmark
HORDHAC: Belgium vs Japan